သားအမိနှဈယောကျကတော့တေးသီခငျြးလောကမှာ အောငျမွငျနကွေတဲ့ အဆိုရှငျကွီးတှဖွေဈကွပါတယျ. – Cele Top Stars
အသံခြိုခြိုလေးကိုပိုငျဆိုငျထားကွတဲ့ အဆိုတျောနှဲ့ယဉျဝငျးနဲ့အဆိုတျောသံသာဝငျးတို့သားအမိနှဈယောကျကတော့ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို တဈခဲနကျပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။လကျရှိအခြိနျမှာလညျး.
နှဲ့ယဉျဝငျးနဲ့သံသာဝငျးတို့သားအမိနှဈယောကျက တေးသီခငျြးလောကမှာ အောငျမွငျနကွေတဲ့အဆိုရှငျကွီးတှဖွေဈကွပါတယျနျော။သံသာဝငျးရဲ့ခဈြခငျပှနျး အနဂ်ဂကလညျး တေးသံရှငျတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့သူမတို့မိသားစုလေးကတော့ ဝါသနာတူကွတဲ့ခဈြစရာမိသားစုလေးပဲဖွဈပါတယျ။သံသာဝငျးနဲ့အနဂ်ဂတို့မှာ
သမီးခြောလေးတဈယောကျလညျးထှနျးကားထားလို့ မိသားစုဘဝလေးက ပိုမိုပွညျ့စုံသှားတာဖွဈပါတယျနျော။အနဂ်ဂကလညျး အိမျထောငျဦးစီးကောငျးတဈယောကျပီသစှာနဲ့ ခဈြဇနီးလေးနဲ့သမီးလေးကိုမတ်ေတာတှအေပွညျ့အဝပေးပွီး ကွငျကွငျနာနာစောငျ့ရှောကျတာဖွဈပါတယျ။ယခုလိုကိုဗဈကာလမှာတော့
အနုပညာအလုပျတှလေညျး နားထားရတာကွောငျ့ အနဂ်ဂနဲ့သံသာဝငျးတို့က မိသားစုကိုသာအခြိနျအပွညျ့ပေးပွီးဂရုစိုကျနကွေတာဖွဈပါတယျနျော။ အခုဆိုရငျတော့ သံသာဝငျးက ခဈြမမေနေဲ့အတူ လိုအပျတာလေးတှဝေယျဖို့အတှကျShoppingထှကျလာတာဖွဈပါတယျ‌နျော။Kaylaလေးကလညျး မမေနေဲ့ဘှားဘှားတို့အပွငျသှားကွတော့
သူကပါအတငျးလိုကျလာပွီး သုံးယောကျသား ဈေးဝယျစငျတာကိုရောကျလာကွတာဖွဈပါတယျ။သံသာဝငျးကတော့”Covidကာလအပွငျလုံးဝမထှကျတဲ့ဘှားဘှား Joyce..Christmas cake လေး ဖုတျခငျြလို့တဲ့.. လိုတဲ့ပစ်စညျးလေးတှဝေယျခငျြလို့ ..မနကေ့ shopping လေးခဏ ထှကျပါတယျ.. ထှကျခါနီးမှ ..Kayla က ထုံးစံအတိုငျး..
အတငျးလိုကျလာပါတယျရှငျ.”ဆိုပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ပုံလေးတှနေဲ့အတူ ရေးသားမြှဝလောတာဖွဈပါတယျနျော။အစမှအဆုံးဖတျ ပေးသော Cele top stars ပရိတျသတျကွီးအားကြေးဇူးတငျပါတယျ ။အနုပညာရှငျတှရေဲ့ သတငျးတှကေိုအစဉျအပကျြ တငျဆကျပေးနသေော cele top stars page လေးကို like and share လေးပွုလုပျပေးကပြါအုံးနျော…
အသံချိုချိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ အဆိုတော်နွဲ့ယဉ်ဝင်းနဲ့အဆိုတော်သံသာဝင်းတို့သားအမိနှစ်ယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို တစ်ခဲနက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်း
နွဲ့ယဉ်ဝင်းနဲ့သံသာဝင်းတို့သားအမိနှစ်ယောက်က တေးသီချင်းလောကမှာ အောင်မြင်နေကြတဲ့အဆိုရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။သံသာဝင်းရဲ့ချစ်ခင်ပွန်း အနဂ္ဂကလည်း တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူမတို့မိသားစုလေးကတော့ ဝါသနာတူကြတဲ့ချစ်စရာမိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သံသာဝင်းနဲ့အနဂ္ဂတို့မှာ
သမီးချောလေးတစ်ယောက်လည်းထွန်းကားထားလို့ မိသားစုဘဝလေးက ပိုမိုပြည့်စုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
အနဂ္ဂကလည်း အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာနဲ့ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့သမီးလေးကိုမေတ္တာတွေအပြည့်အဝပေးပြီး ကြင်ကြင်နာနာစောင့်ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာတော့
အနုပညာအလုပ်တွေလည်း နားထားရတာကြောင့် အနဂ္ဂနဲ့သံသာဝင်းတို့က မိသားစုကိုသာအချိန်အပြည့်ပေးပြီးဂရုစိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်တော့ သံသာဝင်းက ချစ်မေမေနဲ့အတူ လိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ဖို့အတွက်Shoppingထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်‌နော်။Kaylaလေးကလည်း မေမေနဲ့ဘွားဘွားတို့အပြင်သွားကြတော့
သူကပါအတင်းလိုက်လာပြီး သုံးယောက်သား ဈေးဝယ်စင်တာကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သံသာဝင်းကတော့”Covidကာလအပြင်လုံးဝမထွက်တဲ့ဘွားဘွား Joyce..Christmas cake လေး ဖုတ်ချင်လို့တဲ့.. လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ချင်လို့ ..မနေ့က shopping လေးခဏ ထွက်ပါတယ်.. ထွက်ခါနီးမှ ..Kayla က ထုံးစံအတိုင်း..
အတင်းလိုက်လာပါတယ်ရှင်.”ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အစမှအဆုံးဖတ် ပေးသော Cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။အနုပညာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေကိုအစဉ်အပျက် တင်ဆက်ပေးနေသော cele top stars page လေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးကျပါအုံးနော်…
ကွျောငွာလေးတှနေဲ့ Music Video တှကေို လကျမလညျရအောငျ ရိုကျကူးနရေ တဲ့မမဆောငျး